Ayinguye wonke umntu onxibelelana nawe onguMthengi | Martech Zone
Ukunxibelelana kwi-Intanethi kunye notyelelo olukhethekileyo kwiwebhusayithi yakho ayisiyomfuneko kubathengi kwishishini lakho, okanye nakwabo banokuba ngabathengi. Iinkampani zihlala zenza impazamo yokucinga ukuba lonke utyelelo kwiwebhusayithi ngumntu onomdla kwiimveliso zabo, okanye wonke umntu okhuphela iphepha elimhlophe lilungele ukuthenga.
Ayikho njalo. Akunjalo konke konke.
Undwendwe lwewebhu lunokuba nezizathu ezininzi ezahlukeneyo zokusebenzisa indawo yakho kunye nokuchitha ixesha kunye nomxholo wakho, akukho nanye inento yokwenza nokuba ngumthengi wokwenyani. Umzekelo, iindwendwe kwindawo yakho zinokuba:
Abakhuphiswano bahlala bejonge kuwe.
Abafuna umsebenzi bafuna i-gig engcono.
Abafundi baphanda iphepha lekota yekholeji.
Kwaye okwangoku, phantse wonke umntu owela kwezi ndidi zintathu uhlala esemngciphekweni wokufumana umnxeba okanye ukuvala uluhlu lwe-imeyile.
Ukubeka zonke iindwendwe kwibhakethi labathengi yinto eyingozi. Ayisiyongxaki enkulu kuphela yezixhobo zokulandela umntu ngamnye owabelana nenombolo yakhe yomnxeba okanye idilesi ye-imeyile, kodwa inokudala amava amabi ebantwini abangenanjongo zokuba zijolise kuthotho lwezinto zokuthengisa.
Ukuguqula iindwendwe kubathengi, okanye nokwazi nje ukuba zeziphi iindwendwe ezifanelekileyo ukuguqula, kufuna ukuqonda okunzulu ukuba bangobani. Kulapho I-3D (enamacala amathathu) ekhokelayo udlala.
Ukukhangela amanqaku akukho ntsha, kodwa ukunyuka kweDatha eNkulu ungenise isizukulwana esitsha se-3D ekhokelela ekufumaneni izisombululo ezongeza ubunzulu kwindlela abathengisi kunye neengcali zentengiso abajonga ngayo abathengi kunye nethemba. Ukufumana amanqaku kwi-3D kukuzivelela kwendalo kwedatha enexabiso obukade uyiqokelela kubathengi bakho iminyaka, kwaye uyisebenzisela ukubanceda aba bathengi kwaye ekugqibeleni, yonyusa ukuthengisa kwakho kunye nomgca wakho osezantsi.
Nokuba ishishini lijolise kwi-B2C okanye kwi-B2B yeendlela zokuthengisa, amanqaku ekhokelwa yi-3D angabanceda ukuba balinganise ukuba ikamva okanye umthengi ulingana njani neprofayili yabo "efanelekileyo", lonke elixa kulandelwa inqanaba lokuzibandakanya kunye nokuzibophelela. Oku kuqinisekisa ukuba ujoliso lwakho kubantu abanokuthenga ngokwenene, kunokuphosa umnatha obanzi-kwaye obizayo-ukufikelela kubo bonke abatyeleli abasandula ukufika kwindawo yakho.
Okokuqala, Chonga inani labantu okanye i-firmagraphics
Uya kwakha amanqaku akho e-3D ngokuchonga umthengi wakho. Uya kufuna ukwazi ukuba “Ngubani lo mntu? Ngaba bayilungele inkampani yam? ” Uhlobo lweshishini okulo luya kugqiba ukuba yeyiphi iprofayile oza kuyisebenzisa ukuya kumanqaku e-3D kubathengi bakho.
Imibutho ye-B2C kufuneka ijolise kwidatha yabantu, njengobudala babo, isini, umvuzo, umsebenzi, ubume bomtshato, inani labantwana, imifanekiso eqingqiweyo yamakhaya abo, ikhowudi ye-zip, ubhaliso lokufunda, ubulungu bombutho kunye nokudibana, njalo njalo.
Imibutho ye-B2B kufuneka ijolise kwi-firmagraphicdata, ebandakanya ingeniso yenkampani, iminyaka kushishino, inani labasebenzi, ukusondela kwezinye izakhiwo, ikhowudi ye-zip, ubume obunabantu abambalwa, inani lamaziko enkonzo kunye nezinto ezinje.
Icandelo lesibini lokufumana amanqaku kwi-3D kukuzibandakanya
Ngamanye amagama, uya kufuna ukwazi ukuba lo mthengi uzibandakanya njani negama lakho? Ngaba bakubona kuphela kwimiboniso yorhwebo? Ngaba bathetha nawe ngefowuni rhoqo? Ngaba bayakulandela kwi-Twitter, ku-Facebook nakwi-Instragram kwaye bajonge kwi-FourSquare xa betyelele indawo okuyo? Ngaba bajoyina ii-webinars zakho? Indlela abadibana ngayo nawe inokuchaphazela ubudlelwane babo nawe. Unxibelelwano lomntu ngakumbi luthetha ubudlelwane obuninzi bobuqu.
Okwesithathu, chonga apho umthengi akho kubudlelwane babo nawe
Ukuba awukabikho, kuya kufuneka ubeke icandelo ledatha yakho ngokobude bexesha umthengi wakho abelikhasimende lakho. Ngaba lo ngumthengi wobomi bakho uthenge yonke imveliso onayo? Ngaba lo ngumthengi omtsha ongayazi yonke iminikelo yenkampani yakho? Njengoko unokucinga, uhlobo lwe-imeyile oyithumela kumthengi wobomi bakho bohluke kakhulu kuleyo uyithumela kumntu kwasekuqaleni kubudlelwane bakhe nawe.
Ngelixa abathengisi abaninzi behlula iinkcukacha zabo kubalo lwabantu okanye kwiifemagraphics kuphela, kufuneka babe njalo uvakalelo kwinqanaba lomthengi kumjikelo wobomi kwaye uthembele ngakumbi kumanqaku e-3D. Umthengi omtsha okhe wathumela nge-imeyile ngekhe womelele njengomthengi wexesha elide otyelele iofisi yakho. Kwangokunjalo, umntu odibene naye kumboniso wezorhwebo unokuba ngumthengi obuthathaka kunalowo athe cwaka wathenga kuwe kangangeminyaka emihlanu. Awuyi kuyazi loo nto ngaphandle kokufumana amanqaku nge-3D.
nika zonke undwendwe unyango olumhlophe lweglavu.
Phakathi kwayo yonke le ntetho malunga nokusebenzisa amanqaku ekhokelwa yi-3D ukugxila kubakhenkethi abanakho ukuthenga, ndingonwaba ukuba khange ndikhankanye ukuba lonke unxibelelwano nomtyeleli kufuneka lube ngamava onyango olumhlophe-lwenyameko, olunobuhlobo kunye nesisombululo -Kuqhutywa ngendwendwe. Khumbula, ayisiyokwenza eyona mali kwintengiso yokuqala. Imalunga nokubonelela ngento efunwa lundwendwe ngokwenene, eya kuthi ikhokelele kumava abathengi kunye nokuthengisa okuzayo. Yandisa le ntlonipho kubo bonke abatyeleli, nkqu nabo bakhuphisana nabo, abafuna umsebenzi kunye nabafundi beekholeji. Awusoze wazi xa ububele obuncinci buza kuhlawula izabelo kamva.
Awunakho nje ukufumana abathengi abalunge kakhulu. Kufuneka uzihlakulele. Njani? Ngokubenza bakwazi ukuhamba ngokungagungqi kwisigaba ngasinye sobomi, befumana umxholo olungileyo okanye unxibelelwano abalufunayo apha endleleni. La ngamandla e-Right On Interactive's Lifecycle Marketing solution: ukuxhobisa imibutho ukuba yazi ngqo apho ithemba okanye umthengi akuyo kubudlelwane babo ne-brand-ukusuka kwithemba ukuya kwi-fan fan-kunye nendlela efanelekileyo yokubasondeza ukuze wandise ixabiso lobomi.
Ukwazisa: Ekunene kwi-Interactive ngumthengi wethu kwaye unika inkxaso Martech Zone. Funda ngakumbi malunga nesisombululo sentengiso yobomi namhlanje:
Funda ngakumbi malunga neLungelo lokunxibelelana
tags: Ukufumana amanqaku ama-3db2bb2cAbakhuphiswanoumthengiumjikelo wobomi bomthengiintengiso yobomi bamakhasimendelwabantuqinisekisaiqulunqoabafundi abafuna umsebenziukukhokela amanqakuundwendwe oluku-intanethiekunene kunxibelelwanoiindwendweiindwendwe zewebhu